Lalao mpamosavy 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.Online
Lalao mpamosavy. Lalao tena mahafinaritra izy io, mampivelatra ny lojika sy ny fitadidiana ary ny fahaiza-manao eo amin'ny habakabaka. Fantaro ny tantarany, ny karazany ary ny fomba filalaovana.
Lalao mpamosavy: ahoana no milalao tsikelikely? 🙂
Milalao Sorcerer Game amin'ny Internet maimaim-poana, tsotra araho ireto torolàlana manaraka ireto :
dingana 1 . Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana mankamin'ny tranonkalan'ny lalao Emulator.online.
dingana 2 . Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Mila tsindrio fotsiny ianao Play ary afaka manomboka misafidy ny fanaingoana tianao indrindra ianao. 🙂
Dingana 3. Eto bokotra ilaina sasany. Ianao dia afaka " Manampy na esory ny feo ", tsindrio ny" Play "bokotra ary manomboka milalao, azonao atao" Pause "Ary" Haverina velomina "na oviana na oviana.
Dingana 4. Mba handresena ny lalao dia tsy maintsy mihinana ny paoma rehetra ianao nefa tsy mikapoka ny rindrina na ny tenanao . Izay mahazo isa betsaka amin'ny faran'ny lalao dia handresy.
Inona no lalao Sorcerer? 🔴
Sorcerer dia lalao tsotra sy mahafinaritra Azonao atao ny miditra amin'ny Internet amin'ity pejy ity.
Snake-Ny lalao karazana no tadiavina indrindra noho ny fahatsorany, ny filalaovana ary noho ny fahafinaretana fatratra, ary ny Sorcerer dia iray amin'ireo lalao mahafeno ireo toetra rehetra ireo.
Ny mpamosavy dia manipy baolina miloko amin'ny alalany amin'ny rojo, izay misy an'ireny sphericals ireny ihany. Ny iraka ataon'ny mpamosavy dia ny hampanjavona ireo baolina rehetra alohan'ny hahatratrarany ny lavaka famaranana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manantona baolina telo na maromaro mitovy loko ianao mba hipoahan'izy ireo ary hanjavona amin'ny rojo ary hahatratra ny tanjonao.
Tantara mpamosavy ⚫
Lalao toa ny Sorcerer, izay mikendry ny hamotika ny rojom-pilalaovana amin'ny alàlan'ny fanipazana ireo vovoka miloko avy amin'ny teboka miorina, dia noforonina tamin'ny 1995.
Ny kendren'ny ankizy dia ny ankizy. A lalao ho an'ny ankizy , satria ny mekanisma dia tsotra ary ny baolina miloko dia tian'ny ankizy rehetra. saingy tao anatin'ny fotoana fohy dia hita fa tsy ny ankizy ihany no te hilalao, olon-dehibe koa tia ity lalao ity . Nahagaga ny mpamorona azy io ary misy dikanteny hafa noforonina tamin'io lohahevitra io ihany.
Ny lazany lehibe dia noho ny fisian'izany nilalao tamin'ny alàlan'ny solosaina taorian'ny fividianana ny cartridge dia izay no nahatonga azy io noheverina ho lalao pc. Amin'izao fotoana izao dia tsy ilaina ny mividy ara-batana ny lalao izay fandrosoana lehibe.
ny famolavolana tsotra midika izany fa azo lalaovina amin'ny fitaovana rehetra izy io, na amin'ny alàlan'ny console, mobiles, tablette na even maimaim-poana amin'ny alàlan'ny pejy an-tserasera.
Tsy misy fampidirana goavambe, tsy misy takiana sary lehibe na sarotra, lalao tsotra sy sarotra ary mampiala voly ity.
Karazana lalao mpamosavy 🔵
Ny lalao mpamosavy dia karazany ny lalao baolina miloko . Azonao atao koa ny mahalala azy amin'ny lalao Bubble na shooter bubble ary ny tanjona dia mitovy, manimba ny rojo na ny filaharan'ny baolina miloko amin'ny fanipazana miboiboika. Rehefa manambatra mitovy loko na telo na mihoatra ianao dia esorina izy ireo.
Hanolotra ny anaran'ny lalao misolo tena an'ity endrika ity izahay.
Iray amin'ireo bubble malaza indrindra . Amin'ity tranga ity dia tsy rojo baolina izy, fa miangona eo amin'ny valindrihana lamba ireo baolina ary tsy maintsy esorinao alohan'ny hidinan'izy ireo amin'ny tany.
Kilasika iray hafa amin'ny lalao video bubble, miaraka amin'ny tena rafitra tsotra nefa haingana manery anao hisaina haingana raha tsy tianao ny hikapoka anao ilay masinina.
Ireo boribory dia mihodina manodidina ny tadibadika manakaiky ny afovoany izany. Mba hisorohana izany tsy hitranga dia mila mitifitra vovoka ianao hampidirana azy ireo ao anaty rojo, ka ataovy vondrona 3 na maromaro ka ho lasa fohy kokoa. Raha vita amin'ny iray amin'ireo rojo ianao dia handeha amin'ny ambaratonga manaraka, haingana kokoa ary sarotra kokoa. Ianao ve no handresy ilay bibilava misy loko maro?
Amin'ity tranga ity dia misy fanovana ary ny tena izy dia toy ny samy hafa voankazo , izay tsy maintsy hidiranao amin'ny vondrona misy 3 na mihoatra hanafoanana azy ireo ary hamafana ny efijery.
Na izany aza, ity lalao ity dia manana singa vitsivitsy izay mampiavaka azy. Ohatra, rehefa mandeha ny fotoana dia midina ny bubble , ka raha tsy mamaly haingana ianao dia mety ho eo am-pamaranana ny lalao aloha be noho ny ampoizinao.
Ary raha mbola tianao ny hampientanentana azy kokoa, andramo ny maody colorblind, izay nanovana ny loko ary mety ho mora kokoa aminao na tsia.
Fitsipiky ny lalao mpamosavy 📏
Milalao mpamosavy dia tena mora sy mahafinaritra , izany no lalao mety indrindra ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Ny sisa ataontsika dia ampiasao ny mpiasan'ny majia handefasana ny baolina amin'ny toerana marina ao anaty rojo. Ny tanjonay dia ny hamorona vondrona baolina tsy mitovy 3 farafaharatsiny mba hanjavon'ireo baolina ireo amin'ny rojo ary hanakana azy tsy hitombo.
Ianao dia tokony esory ny baolina rehetra alohan'ny hahatongavany amin'ny farany ny lalana ary mivoaha amin'ny lavaka.
Maika fa mandeha haingana be! Misy ambaratonga 3 samihafa hamita ny lalao.
Torohevitra momba ny lalao mpamosavy 🙂
Tsy manana fitsipika sarotra be ny mpamosavy, nefa tsy midika izany fa lalao mankaleo. Raha ny marina, raha tsy manao izany ianao raiso ireo torohevitra ireo, ianao dia mety hianjera amin'ny ambaratonga ary tsy afaka handalo azy ireo.
Ity no torohevitra voalohany omenay anao. Tamin'ny voalohany dia toa tsy misy fahasarotana io ary handalo haingana ny haavony ianao. Tsia! Rehefa te-hahita azy ianao ny rojo baolina dia lehibe ary mandeha haingana ka tsy manam-potoana hanesorana azy ary ny hany azonao dia ny mametraka baolina miloko amin'ny toerana tsy mety.
Esory ny baolina
Eny, efa fantatsika fa izany no tanjona. Fa izay baolina no esorinao aloha?
Isaky ny afaka manao izany ianao esory ny baolina avy amin'ny lohan'ny rojo. Tsarovy fa ireo no ho tonga voalohany amin'ny lavaka izay mitondra mankany amin'ny disqualification antsika, ary izany no tadiavintsika hialana.
Adinoy ireo farany, farafaharatsiny raha mbola lehibe ny rojo.
Famafana mandeha ho azy
Inona ity famafana mandeha ho azy ity? Karazan-tsipelina avy amin'ny mpanao majia? Tsia, tsia. Io dia hitovy amin'ny fananana a tetika. Tsy maintsy ataontsika izay rehefa manafoana loko iray amin'ny rojo dia mitovy loko eo amin'ny tendrony mba hamonoana azy ireo rehefa nanjavona ilay voalohany.
Mikorontana be? Omeko anao ny ohatra.
Ao amin'ny rojonay dia manana izao manaraka izao izahay: mavo, lilac, lilac, mavo, mavo, manga, green, mavo ...
Ny toerana mety indrindra hanombohana ny baolina lilac dia eo anelanelan'ny lilac roa miaraka. Ka esorinay amin'ny laharana ilay loko lilac, sa tsy izany? Ary ny zavatra manaraka izay hitranga dia rehefa miaraka ny loko mavo dia mifanipaka ny baolina mavo telo izay manjavona irery.
Tianao ve ny kinova amin'ity lalao ity? Tsy manampy anao ireo fikafika ireo ? Araka ny hitanao dia misy lalao sy fomba maro hankafizana ny Lalao mpamosavy.
Inona no andrasanao manomboka mankafy!